Azo atao ve ny mividy rohy amin'ny tranokala PR10?
Angamba mety ho tsara loatra ny ho marina. Na izany aza, tena misy ny zava-drehetra raha toa ka manana fomba fijery mahomby amin'ilay olana ianao. Tokony ho fantatrao fa maro ireo fomba ahafahana mahazo ny backlinks PR 10 isan'andro. Ny ilainao dia ny mitazona ny masonao sy ny sofinao misokatra hatrany hatrany hitady ny fifandraisana vaovao fifandraisana vaovao. Azo ekena ny hanandrana teknika fanorenana mahomby raha oharina amin'ny blaogy vahiny na ny rohy fanehoan-kevitra mba hahazoana rohy ambony ao anatiny.
Ndeha hifanakalozantsika ny fomba mety hahazoana ny backlinks PR10. Ny sasany amin'ireo webmasters dia mino fa ny hany fomba hahazoana rohy avo lenta dia ny famokarana votoaty mahafinaritra. Raha toa ka ilaina ny votoatiny, dia hahazo rindran-tsarimihetsika ekstetie ianao. Na dia izany aza dia lavitra ny zava-misy. Hiafara amin'ny farany izany, fa iza no mahazo an'izany?. Fomba hafa mahazatra hanamboarana rindran-kiheba PR10 dia ny mamorona votoaty lehibe ary manao fanentanana ao amin'ny tsenan'ny tsenanareo izay mangataka tompon'ireo tranonkala sy bilaogera mba hampifandray anao.
Na izany aza, samy tsy mahomby avokoa ny roa tonta fananganana rohy. Voalohany indrindra, tsy mora ny mamorona votoaty mahafinaritra manome ny mpampiasa vaovao izay tsy mbola henony taloha. Mitaky fotoana sy ezaka be ny manamboatra izany tranonkala izany. Ny olana hafa dia rehefa tsy mifamatotra ny votoatinao. Amin'ity tranga ity dia afaka manisa loharano tranokala ambany sy ambany ianao. Ny fitoriana dia tsy miasa amin'ireo toe-javatra ireo. Ankoatra izany, ireo mpandinika ny tetikasa dia mahazo fangatahana maro mba hampifandray ireo fahafahana manao fanorenana isan'andro. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, izy ireo dia tsy mandady ny fangatahanao raha tsy mamaky ny votoatiny akory aza.
Ny vahaolana tonga lafatra ary, raha ny marina, ny fiainako isaky ny manao ny zava-drehetra amin'ny tenanao nefa tsy miantehitra amin'ny hafa. Andeha hojerentsika akaiky ny fomba fiasany.
Mamorona ny bikanao manokana
Mety miteraka adala, fa afaka mamorona ny bikanao manokana amin'ny loharanom-baovaon'ny avo hafa. Ohatra, mahaliana ahy ny loharanom-baovao PR 10 toy ny Google, Reddit, Facebook, LinkedIn, YouTube, ary ny hafa. Ireo tranonkala ireo dia ahafahanao mamorona ny mombamomba anao tsara indrindra, mahaliana ary manatsara ny toerana misy anao. Tsy azonao atao ny mametraka ny rohy ao amin'ireo tranonkala malaza. Ilainao ny mamorona fomba tsara sy avo lenta ary misy eo amin'ny iray amin'ireny tranonkala ireny ary avelao hiverina any aoriana any. Mila mamorona profil tsara ianao ary mameno izany miaraka amin'ny fampahalalana tena ilaina. Ny tanjonao voalohany dia ny mamorona votoaty marobe izay mifandraika amin'ny rohy misy anao. Raha manao izany ianao, dia hanao ny rohy misy hery sy tontolon'ny fifandraisana ianao.
Amin'ny sehatra manaraka, mila mamorona rohy ianao eo amin'ny loharano rehetra misy ny pejy misy anao. Ohatra, raha mamoaka lahatsoratra vaovao ao amin'ny Facebook ianao, dia tsy maintsy mampifandray azy avy amin'ny LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, ary ny kaonty hafa.Ary ny andininy vice, ka ny pejy rehetra dia manana backlinks. Vokatr'izany dia hahazo tolotra goavana PR 10 ianao amin'ny ezaka ataonao nefa tsy mandany vola Source .